Suldan waa wiilka ugu oradka dheereeya Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Warsame Elmi/ SR sawir: Suldan Hassan (18jir) waa xidig ka tirsan da'yarta qaranak Sweden ee oradka. Foto: Warsame Elmi/ SR
Suldan waa wiilka ugu oradka dheereeya Sweden
La daabacay fredag 15 april 2016 kl 14.57
Suldan Hassan waa wiilka ugu dheereeya dalkan Sweden markey timaado oradada dhexe. Waxaana xidig ka tirsanyahay naadiga Ullevi Friidrot oo magaalada Göteborg ka jira.
Naadiigan ayaa sannoyinkii ugu denbeeyey dadaal ku baxiyey soo jiidashada da’yarta ka soo jeeda dadyowga soogalootiga ah ee ku nool xaafadda Angered magaalada Göteborg. Waxuuna naadiga ku guuleystay in uu hnato da’yar faro badan oo hibo u leh oradka una badan soomaali. Suldan Hassan iyo Mohamed Mahmoud oo labaduba waxay naadigan bilaabeen muddo labo sanno iyo bar ka ah, waxaana lagu daray qaranka da’yarta ee juniorlandslaget ee dhanka oradka dhaxe. Ma horeba waxay soo hooyeen billado iyo guulo dhanka oradka ah. Halka Suldan Hassan mar horeba noqday wiilka ugu dheereeya Sweden da’diisa
- Kooxdeyda soomaali ayaa ka buuxda, waana fiicanyahiin. Tabobaraheyga Iswiidhishka xataa aad uu u fiicanyahay. Inshallah qof keliya in uu fiicnaado marabno ee waxaan rabnaa in kuwo badan fiicnaadaan oo naadiga ka soo baxaan, ayuu yeri Suldan Hassan oo aan kula kulanay Friidrottenshus magaalada Göteborg isagoo sku diyaarinaya tabobar uu ugu diyaar garoobaya tartan aduunka oradka ee 20 jirada oo bisha julay lagu qaban doono dalka Poland.
Tartan heer qaran ah oo sannadkii hore lagu qabtay magaalada Cali dalka Colombiya. Suldan Hassan oo markaa 17 sanno jir ahaa ayaa ka mid ah tartamayaashii mataliyey Sweden. Inkasta oo wax ka yar labo sanno oo tabobar oradka ah qaatay hadana Suldan Hassan waxuu ka mid noqday tobanka oradyahan ee kaalinta wanaagsan ka galay ciyaarahii lagu qabtay Colombia. Tartamayaasha mataleyey Yurub hal ruux ayaa ka natiijo fiicnaadey, halka inta kale ka yimaadeen waddamada bariga Afrika, sida Kenya, Itoobiya iyo weliba Eritrea. Balse Suldan ayaa u arag dhib u in tartamayaasha bariga Afrika ka yimid ka natiijo fiicnaadeen, waayo buu yeri ”hadaan labo sanno oo kale tabobar qataa waa ogahay in aan dhaafi doono oo ka natiijo fiicanaan doono”.
- Uma fikireyn in ay iga fiicanyahiin balse in ay iga tabobar badanyahiin. Ma jiraan aduunka dad intaan tabobarka wadey oo kale tabobar qaatey oo keenay dhibcaha iyo waqtiga anniga keenay, ayuu yeri Suldan.
Garoon ku yaala xaafadda Frölunda magaalada Göteborg. Macallin Curt-Roland Ljumg ayaa da’yar oradyahano ah oo u badan soomaali ku amraya in ay dhowr wareeg ku soo ordaan garoonka. Waa qayb ka mid ah tabobarka ay maanta qaadanyaan dhallinyarada. Curt-Roland Ljung waa tabobare caan ah oo macallin ka ah naadiga ciyaaraha fudud ee Ullevi. Muddo saddex sanno iyo xoogaa laga joogo ayuu Curt xiriir la sameeyey jaaliyadda soomaalida ee xaafadda Angered Göteborg, iyadoo ujeedadiisa aheyd in uu helo da’yar oradka ku wanaagsan iyo weliba in uu dhallinyarada soogalootiga ah ku caawiyo sidii ay w x uga ogaan lahaayeen ururada ciyaaraha iyo fursadaha laga heli karo. Billowgii hore 53 dhallinyaro soomaali ah ayaa ku soo biirtay naadiga Ullevi inkasta oo maanta ay ka hareen tiradas 15 keliya.
- Qaar waxay ku biireen naadiyada kale qaarna wey iskaga hareen oradka. 15 ayaa soo hartay balse kooxda ma ahan keliya soomaali balse waa iskujir. Waxaa ku jira dhor Iswiidhish ah, kuwo waddanka ku cusub oo Ciraaq hadda ka yimid, balse inta badan waa soomaali, ayuu yeri Curt-Roland Ljung.
Naadigaa bixiya kabaha iyo qarashaadka kale
Naadiga Ullevi ayaa dhallinyaradan soomaalida ah ka baxiya qarashaadka ay uga qayb-galaan tartanada iyo dharka iyo kabaha ay ku ordaan. Sidoo kale waxaa mid kasta laga baxiyaa 1 800 karoon oo qarasha uu joogo sannadkii kaarka jimicsiga ee xarunta Friidrottenshus. ”sababta waa sidaan u siin laheyn fursadan wiilashaan oo qoysaskooda awoodin in ay ka baxiyaan qarashaadka” ayuu yeri Curt-Roland Ljung. Si hadaba naadiga u awoodo baxinta qarashaadkan ayuu nadiga ka dalbaday caawinaad ururka ciwaayaraha fudud ee Göteborg Friidrott, iyagoo ka helay 150 000 oo ah taageero loo baxiyey integration bidrag.
Curt-Roland Ljung ayaa ku fraxsan natiijo uu ka gaaray dadaalkiisa ah soo jeedashada dhallinyarada soomaaliyeed oo naadigu ku guuleystay in uu soo jiito,, gaar ahaan guulaha uu soo hooyey Suldan Hassan oo ah xidig naadigan soo saaray.
- Waa wiil dahab ah oo ku faraxsanahay in uu naadigeena ku soo biiray. Waa wiil cajiib ah oo horeyba uga qayb-galay tartanka caalamka ee da’yarta 20ka hooseysa, ayuu yeri.
Balse ma ahan keliya Suldan Hassan wiilka keliya ee hibada u leh oradka ee uu naadiga gacanta ku haya. Mohamed Mohamoud asna waa wiil kale oo qaran Sweden dhawaan ku biiray oo rajo fiican laga qabo in horumar ka sameeyo ciyaaraha oradka. Mohamed waxuu ku rajo weynyahay in uu tartanka aduunka ee da’yarta oo lagu qaban doono xagaaga dalka Poland uu ka qayb geli doono kuna meteli doono Sweden.